Tag: WordPress theme | Martech Zone
Tag: theme theme
Kwemakore gumi, ini ndanga ndiri pachangu ndichigadzira tsika uye ndakaburitsa plugins, ndichigadzirisa nekugadzira madingindira etsika, uye kugadzirisa WordPress kune vatengi. Chave chiri chinotenderera uye ndine maonero akasimba kwazvo nezve kumisikidza kwandakaita kumakambani makuru nediki. Ini ndanga ndichitsoropodza vavaki - plugins uye madingindira ayo anogonesa zvisina kudzivirirwa kugadziridzwa kune saiti. Ivo kubiridzira, kazhinji vachiwedzera zvakanyanya saizi yemapeji ewebhu saiti uchinonoka
Martech Zone: Kugamuchirwa KuMy New Martech Kuburitswa!
Chishanu, January 6, 2017 Muvhuro, Mbudzi 2, 2020 Douglas Karr
Kwave kungori gore kubva pandakapedzisira kugadzirisazve WordPress yedu saiti. Kunyange ini ndaifarira marongero, ini ndaive netani yemapulagi uye ekugadzirisa kuti iite nenzira yandaida nayo, futi. NeWordPress, izvo zvinogona kutanga kuperetera njodzi kubva pakuita kwekutarisa uye ini ndanga ndichiona kupaza kuri musimboti. Nekudaro, ini ndakaenda kunovhima dhizaini inogona kusanganisa ese makuru makuru maonerwo futi
Mugovera, June 28, 2014 China, Gumiguru 29, 2020 Douglas Karr
Izvo kudiwa kweiyo WordPress kuvandudza kunoramba kuchikura uye vangangoita vese vedu vatengi ikozvino vaine chero saiti yeWordPress kana yakadzamidzirwa WordPress blog. Kufamba kwakasimba - kusingadiwe nemunhu wese asi kune akawanda madingindira, plugins, uye huwandu hwakawanda hwevagadziri izvo zvine musoro. Iko kugona kuchinjisa yako yewebhu kuvapo pasina kubvarura chikuva uye kutanga pamusoro ingori mukana mukuru. Kana iwe uchinge uine iyo
China, November 21, 2013 Douglas Karr
Ini ndanga ndichitsvaga plugin kana imwe kodhi yekutsikisa misoro pane yedu peji peji pa DK New Media kuti ufare uye upfeke peji repamba zvishoma. Dambudziko raive rekuti ini ndine dingindira rakaiswa iro rine minda yakatarwa yeteki mutsetse uye kutsanangurwa kwenzvimbo, uye ini handina kunzwa sekuda kuibvarura nekuda kweshanduko iyi. Kuti uite izvi nema plugins uye theme moditions zvaizoda